Cinwaanka VI Nidaamka ka Cabashada Takoorka
Waaxda Gaadiidka Minnesota ee loo soo gaabiyo (MnDOT) waxaa ka go’an inay xaqiijiso in shaqsi ku nool Gobolka Minnesota iyadoo lagu salaynayo isir, midib, waddanka dhalashada, jinsiyad, da’, naafanimo, heerka dhaqaale, aan looga saarin ka qayb galitaanka, aan laga reeban lacagta caawimaad, ama aan lagu soo rogin takoor koobayo dhammaan barnaamijyada, adeegyada, ama hawlaha ay maamusho waaxda, dadka ay caawiso iyo qandaraaslayaasheeda. Intaas waxaa sii dheer, MnDOT waxaa ka go’an inay hubiso in barnaamijyadeeda ay ku daraan oo ay gaaraan dadka aqoontooda luuqadda Ingiriiska ay kooban tahay.
Kumaa soo gudbin kara Cabasho xagga Takoorka ah
Fadlan dhamaystir Foomka ka Cabashada Takoorka ee MnDOT Cinwaanka VI haddii aad dareento inay ku takoortay MnDOT, dadka ay caawiso, la taliyaasheeda, ama qandaraaslayaasheeda iyadoo takoorka lagu salaynayo isir, midib, waddanka dhalashada, jinisiyad, da’ heerka dhaqaale, naafanimo ama heerka dhaqaale ku xadgubid cinwaanka VI ee xeerka 1964 iyo xukumada la xiriira oo aan takoorka ahayn.
Cabashooyinka waa in ay ahaadaan qoraal gacameed ama qoraal daabacan oo uu saxiixay qofka cabanaya ama qof mas’uul ka ah qofka cabanaya. Dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay Foomka ka Cabashada Takoorka ee MnDOT Cinwaanka VI waa in la dhamaystiraa inta aan la gudbinin.
Xadidaadda la xiriira Gubinta Cabasho xagga Takoorka ah
Cabashada waa in lagu gudbiyaa 180 maalmood gudahood laga soo billaabo taariikhda dhacdada takoorka laguugu eedeeyay.
Halka loo gudbinayo Foomka ka Cabashada Takoorka ee dhamaystiran
Foomamka cabashada waxaa loo gudbin karaa Xafiiska Xuquuqda Madaniga ah ee MnDOT qaab ka mid ah qaababkan soo socda:
Online adigoo ku gudbinaya Shabakada Xafiiska Xuquuqda Madaniga ah: http://www.dot.state.mn.us/civilrights/titlevi.html
Boosto: Waaxda Gaadiidka Minnesota
Xafiiska Xuquuqda Madaniga ah, MS 170
Waxaad sidoo kale ku gudbin kartaa cabashadaada xagga takoorka ah hay’adahan federaalka ah ee hoos ku xusan:
Hay;adda Federaaliga ah ee Qaabilsan Dhismaha Waddooyinka
Xafiiska Xuquuqda madaniga ah
Dabaqa 8-aad E81-105
Hay’adda Federaalka Qaabilsan Gaadiidka Dadweynaha
Digtoonaansho: Kooxda Cabashada
Sidoo kale waxaad kala xidhiidhi kartaa hay’adahan soo socda iyo xafiisyada xuquuqda madaniga ah ee deegaanka wixii macluumaad ah ee ku saabsan nidaamka looga cawdo iyo foomamka lagu cawdo: U.S.
Guddiga Fursadaha Shaqo ee loo Siman yahay ee loo soo gaabiyo (EEOC), Waaxda Xuquuqda Aadanaha Minnesota (MDHR), Waaxda Xuquuqda Madaniga ah ee Magaalada Minneapolis, iyo Xafiiska Xuquuqda Aadanaha & Fursadaha Dhaqaale ee loo Siman yahay ee Magaalada St. Paul (HREEO).
Luuqada Kale iyo Qaabab kale
Foomka ka Cabashada Takoorka ee MnDOT Cinwaanka VI waa la helaa isagoo ku qoran Ingiriis, Isbaanish, Hmong, iyo Soomaali. Codsiyada qaababka kale ama luuqado dheeraad ah ee foomka cabashada waa in lagala xidhiidhaa ADArequest.dot@state.mn.us ama telefoonka TTY 800-627-3529.
Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo buuxinta foomka, fadlan wac ama u dir email Xafiiska Xuquuqda Madaniga ah ee MnDOT. Dacwooyinka la xidhiidha takoorka ee lagu gudbiyo fax ama email waa la aqbali doonaa waana laga hawl galayaa. Dacwooyinka lagu gudbiyo hadal telefoon ama qaabab kale qoraal ayaa loo beddeli doonaa waxaana loo bandhigi doonaa qofka cabanaya si uu u ansixiyo.
Wixii macluumaad dheeraad ah ama su’aalo ku saabsan gudbinta cabasho, la xidhiidh:
Isku-duwaha Cinwaanka VI
Xafiiska Xuquuqda Madaniga ah ee MnDOT